I-WOWOW 5 Ukusetha iNtloko yeShower nge-Handheld, Uxinzelelo oluphezulu lwe-3.5 intshi ye-Matte yoBuso oMnyama oyiNtloko kunye ne-Inch ye-intshi engama-59
Ikhaya / Shower Imibhobho / Iintloko zeshawari eziphathwayo / WOWOW 5 Ukuseta iNtloko yeShower nge-Handheld, Uxinzelelo oluphezulu lwe-3.5 intshi ye-Matte yoBuso oMnyama oyiNtloko kunye ne-Inch ye-intshi engama-59
【Design Contemporary】 Ezi ntloko zihlanjwa ngesandla eziphethe ulungelelwano olufanelekileyo kunye nobunzima esandleni, uyilo lwe-ergonomic lwenza ukuba ubuntofontofo obuphezulu kunye nokusebenziseka lula. Isipreyi esenziwe ngobuciko sityhila iifom ezilula, zokwakha ezihambelana namabhafu anamhlanje kunye nawokugqibela.
【5 Ukutshiza imisebenziHead Intloko yeshawari ineendlela ezintlanu zokutshiza, kubandakanya iMvula, ukuPhulula umzimba, UkuCoca amandla, Imvula + Ukuphulula, Imvula + Ukutshiza Amandla. 5 ukuseta okungafaniyo kwenza uxinzelelo lokunyusa amava okuhlamba nangaphantsi koxinzelelo. Kufanelekile ukuba kuhlanjwe abantwana, ukuhlamba izilwanyana kunye nokucoca i-barthroom ect.
【Kulula ukucoceka kunye neAnti-block blockNo Coca imilomo yemilambo egubungele indawo epheleleyo yeshawari, i-40 eyi-self-Ukucoca imilomo yeerabha eguqukayo kunye nemilomo ye-ABS eyi-18, ezi jets zokucoca i-anti-clog rub-clean zokucoca ngokulula kunye nokuthintela ukwakhiwa kwekalika.
【Izinto zeNkulumbusoShower Matte black plated premium ABS shower, bracket and 59 ″ PVC shower hose, making it durable, rust-proof, fade-proof, resist printa zeminwe kunye namabala amanzi. I-360 ° isibiyeli esilungelelanisayo esihlengahlengisayo sokuhlengahlengisa ii-angles kunye nezikhokelo njengoko ufuna. Amantongomane ombhobho oqinileyo obhedu onxibelelwano oluthembekileyo oluvuzayo.
【Ukufakwa lula】 Akukho sidingo sokutsalela umntu ngemibhobho yamanzi, unxibelelanise nje ngesandla ngokuqinileyo kwimizuzu ngokulandela nje inyathelo lokuyalela ngenyathelo. Ukusebenza nayo yonke imigangatho yemibhobho ye-G1 / 2. Qaphela: Kuqhelekile ukuva ilizwi xa uligungqisa njengoko kukho impeller kwintloko yeshawari enceda ukuvelisa amanzi okuphulula ngcono.
SKU: H5010B iindidi: Iintloko zeshawari eziphathwayo, Shower Imibhobho
9.49 x 6.42 x 3.19 intshi
Intloko yeshawa yesandla x 1, isibiyeli x 1, i-Spare ye-Rubber Washer x 2, iTape yeTefon engavulekiyo x 1, iShower Hose x 1, Isikhokelo soFakelo x 1
Intsha Entsha. Iwaranti eNyaka eli-1
WOWOW 5 Cwangcisa Ingcinezelo High Handheld Shower Head, ...
IiNkqubo zoMbane zeShower ze-5-Umsebenzi oshushu kunye neCol ...
Umsebenzi oMninzi oHanjisiweyo wokuHlamba kunye neMvula iHaa ...